'တစ်ရက် တစ် Gang' ၏ အဆိုတော် Rain, တကယ်ကို Shrimp Gang ‌ကြော်ငြာမော်ဒယ် ဖြစ်လာသည် - 빵야뉴스
최종편집 : 2020-11-26 20:06 (목)
승인 2020.06.12 16:15
[BBANGYA News | Reporter Park Kyung-soo] "Gang Syndrome" မှ Rain (Jeong Ji-hoon) သည် Levi's ပြီးနောက် "Shrimp Gang" ၏ ကြော်ငြာမော်ဒယ် အဖြစ် ရွေးချယ် ခံခဲ့ရသည်။
မကြာသေးမီက အွန်လိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သော 'Gang' သီချင်းသည် ခေတ်စားလာပြီး တစ်ရက် တစ်'Gang' Syndrome ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက Nongshim ၏ 'Shrimp Gang' အတွက် ကြော်ငြာမော်ဒယ်သစ် ဖြစ်လာသည်။
အကြောင်းမှာ သုံးစွဲသူများစွာသည် Rain ၏ “ Gang” music videoကို commentပေးခြင်းဖြင့် “ ပုစွန် Gang၊ ” အာလူး Gang” နှင့်“ ကန်စူးဥ Gang” စသည့် မုန့်များတွင် ကြော်ငြာမော်ဒယ် အဖြစ် Rain ကို အသုံးပြုရန် တိုက်ရိုက် တောင်းဆိုခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တောင်းဆိုချက် ထွက်လာတဲ့ အခါ Nongshim က Rain ကို တရားဝင် တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ မကြာသေးမီက Rain သည် MBC ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွင် “How do you play?” တွင်လည်း “ ပုစွန် Gang၊ ” အာလူး Gang” နှင့်“ ကန်စူးဥ Gang” စသည့် မုန့် ကြော်ငြာ လုပ်ဖို့ ပြောလာတယ်လို့ ပြောခဲ့သည်။
ကြော်ငြာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက “ မကြာသေးမီက သုံးစွဲသူ ထင်မြင်ချက်ကို ထင်ဟပ်စေသော ကြော်ငြာမော်ဒယ် ရွေးချယ်မှုများ တိုးများလာသည်။ ကုမ္ပဏီအတွက် စျေးကွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျော့နည်း စေနိုင်သောကြောင့် win-win အပေးအယူ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်တယ်” လို့ ရှင်းပြခဲ့သည်။
အခြား တစ်ဖက်တွင်မူ Rain သည် 'How do you play?' မှ တဆင့် ကြေငြာခဲ့သော coed dance team အပြင် web variety show ‘WorkMan’၏ Guest အနေ နှင့် Mnet ‘I-LAND’၏ producer အဖြစ် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်သွားရန် စီစဉ်နေသည်။
Ariana Grande X Black Pink Collaboration စက်တင်ဘာလ အယ်လ်ဘမ်တွင် ထုတ်မှာလား?
3 Netflix ရုပ်ရှင် “Malibu Junior Rescue Team” ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ကိုးရီးယားဂျာမန်ကပြားလေး ပါဝင်
4 'Idol Wonderland' teaser ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
5 '아이돌 원더랜드' 티저 공개
6 'Idol Wonderland' teaser released
7 넷플릭스 영화 1위 “말리부 주니어 구조대” 주인공인 한국 혼혈 배우
8 Hwang Minhyun x Jung Dabin ㆍThe drama 'LIVE ON' first broadcast on November 17th!